मृत्युअघि श्रीदेवीसँग भेटेकी बहिनी श्रीलता अहिलेसम्म बेपत्ता, लुक्न पठाइएको खुलासा – Nepal24News
मृत्युअघि श्रीदेवीसँग भेटेकी बहिनी श्रीलता अहिलेसम्म बेपत्ता, लुक्न पठाइएको खुलासा
एजेन्सी। बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युको झण्डै ३ सातापछि उनको विषयमा सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ । उनकी बहिनी श्रीलतालाई दिदी श्रीदेवीको मृत्युको विषयमा चुप रहन भनिएको छ । उनी अहिलेसम्म बेपत्ता छिन् । उनलाई दिदीको मृत्युको विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्न र क्यामेराको अगाडि नजान भनिएको छ । कपुर परिवारले नै उनलाई लुकेर बस्न भनेको बताइएको छ ।
Prevयिनै हुन् पाइलट जस्ले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको निर्देशन नमान्दा यति ठुलो क्षति हुन् पुग्यो ! तर अझै भयानक क्षेति हुने थियो यसरि बचाए !
Nextविमान दुर्घटनामा बाँचेकी बंगलादेशी अहमदले खुसि हुदै भनिन्: ‘नेपाली उद्दारकर्मीले जस्तो चाँडो उद्दार त कतै पनि हुदैन होला’ नत्र कहाँ बाँचिन्थ्यो र?